"डाक्टरहरु साँझको ५ नबज्दै 'पोस्टमार्टम प्रक्रिया' किन बन्द गर्छन् ?" - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिको ‘अप्राकृतिक मृत्यु’ पछि शवको ‘पोस्टमार्टम’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्युको कारण र समय पुष्टि गर्नुका साथै शवको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा पोस्टमार्टम गर्ने गरिन्छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउनका लागि पनि पोस्टमार्टमले सहयोग गर्छ ।
नेपालमा पोस्टमार्टम कहिलेबाट शुरु भयो भन्ने यकिन समय थाहा नभएपनि वि.सं.२०५७ सालबाट तालिमप्राप्त चिकित्सकहरुबाट पोस्टमार्टम गर्न थालिएको भेटिएको छ ।
विशेषत:आफ्नाहरुको मृत्यु पश्चात शोकाकुल परिवारलाई राहात पुर्याउन, घटनाको बारे सत्यतथ्य उजागर गर्न पोस्टमार्टम गर्ने गरिन्छ । प्रायत: दिनको उज्यालोमा मात्रै पोस्टमार्टम गरिँदै आइएको छ । के रातको अध्यारोमा पोस्टमार्टम सम्भव छैन ?
भारतको विधानसभाको बैठकमा पोस्टमार्टमका बारेमा गम्भीर बहस चलेको छ । शोकाकुल परिवारले राहात पाउन भन्ने उद्देश्यबाट प्रभावित भई रातको समय पनि पनि पोस्टमार्टम प्रकिया संचालन गर्नुपर्ने माग सहित विधानसभामा बहस चलेको हो ।
फरेन्सिक विभागका डाक्टरहरुले यस कुरालाई लिएर आ-आफ्नो धारणा दिइरहेका छन् । जहाँ उनीहरुले भनेका छन्, “कृत्रिम प्रकाशमा चोटको रंग रातो नदेखिएर बैजनी देखिन्छ । जसका कारण पोस्टमार्टम गर्न सकिदैन् ।”
“ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडीको कृत्रिम प्रकाशमा चोटको रंग रातो नदेखिएर बैजनी देखिन्छ । फरेन्सिक साइन्समा चोट बैजनी रङ्गको हुनेबारे कुनै उल्लेख भेटिएको छैन ।” डाक्टरहरुको भनाई रहेको छ ।
यद्दपीविधानसभामा विभिन्न सांसदहरु भने यो भनाई डाक्टरहरुको अल्छी प्रवृतिको प्रतिक बाहेक केहि नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । “डाक्टरहरु साँझको ५ बज्दा नबज्दै पोस्टमार्टम प्रक्रिया किन बन्द गर्छन् ?” साँझ ५ बज्दानबज्दै पोस्टमार्टम पक्रिया बन्द गरिदिँदा दुर्गम गाउँबाट आउनेहरु समस्या पर्ने गरेका छन् । रातको समयमा अस्पताल आइपुग्ने मानिसहरुलाई मध्यनजर गर्दै आफूहरुले यो कुरा विधानसभामा उठाएको सांसदहरु बताउँछन् ।
विवाद चर्किदै गएपछि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभागसँग जवाफ मागेको छ । यद्दपी सरकारी अस्पतालका फरेन्सिक विभागका डाक्टरहरु समय बढाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै आईरहेका छन् ।
पोस्टमार्टम मेडिकोलिगल प्रोसेस भएता पनि न्याय सम्बद कार्य पनि हो । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा शवको रङ्ग, चोटको प्रकार, चोटको उल्लेख साथै चोटको समय पुष्टी पनि गरिन्छ । कयौं धर्मावलम्बीहरु रातको समयमा अन्त्येष्टि गर्न नहुनेमा विश्वास राख्दछन् । जसका कारण पनि पोस्टमार्टम रातको आठ बजेसम्म गर्नुको तुक नरहेको केहि फरेन्सिक डाक्टरहरुको मत रहेको पाइएको छ ।